Disember, 2018 tabo cusub, Microstation-Bentley
Si dhab ah uma iibineyno software, waxaan iibinaa natiijada software-ka. Dadku naga ma siiyaan barnaamijka, waxay na siiyaan waxa ay qabtaan
Kobaca Bentley ayaa inta badan soo iibsatay iibsashada. Laba ka mid ah sanadkan waxay ahaayeen Ingiriiska. Synchro; barnaamijka qorsheynta, iyo Legion; dadka badankood iyo barnaamijka khariidadaha lugta dadka lugeynaya, labadaba loo yaqaano lana ixtiraamo Boqortooyada Ingiriiska. Iskudhin la'aanta nidaamyada habka maaraynta habka maaraynta iyo hantida Bentley ayaa ballaarin doona adeegsigeeda waxayna keeneysaa qiime dheeraad ah ee macaamiisha barnaamijyada kaabayaasha. Bentley waxay kaloo soo saartaa qaar ka mid ah alaabta guriga; 2019 waxay arki doontaa furitaanka adeega iTwin ee doonaya inay abuuraan fikradda "Digital Twin", oo ah badeecada ugu dambaysa ee Dhismaha Macluumaadka Dhismaha (BIM), iyo maktabadda makhaayadaha ee iModel.js ee ku quudin doonta. Waa maxay taasi? Ilaha furan? Ma waxaan rajeyneynaa in aan aaminsanahay in wax aanan arki karin oo aan iibsaneynin uu abuuri doono lacag loogu talagalay horumariyayaasheeda? U sheeg in taasi.
Ma jirtey tiro ka mid ah iibsiyada Bentley sanadkan, kaas oo aad ugu faraxsani?
Waxaan si sahlan u dhaqaajin karaa waxyaabo badan, laakiin fadhiya oo dib u eegaya waxa dadku hadda la qabtaan barnaamijkeena waa mid dhab ah. Waxaa jira suurtagal aan la aqbali karin oo lagu xallin karo xalalka waxtarka alaabooyinkeena. Waxaan ku faraxsanahay sida ay Synchro u sameysay farqi weyn oo loogu talagalay dadka isticmaala. Waxaan sidoo kale la yaabay waxa dadku ka hadlayo Legion. Waxaan u maleynayaa in qof walba uu isticmaalayo Legion!
Boqortooyada Midowday, hadda waxaan leenahay Guddiga Gobollada ee Dawladda dhexdeeda. Waa maxay waxa ku saabsan xogta juqraafiyeed ee keenaya dawladaha inay qiimeeyaan qiimaha?
Fikradda ku noqoshada dijitaalka ayaa bilaabeysa inay soo cusbooneysiiso. Dadku waxay bilaabeen inay gartaan in haddii macluumaadku jiro, ay tahay in laga faa'iideysto loona isticmaalo sida ugu ballaaran ee suurtogalka ah. Kaliya jiritaanka macluumaadka saxda ah iyo waqtiga ku habboon ayaa leh baahi badan. Isbedelkaas ayaa la hubaa inuu sii socon doono. Dadku waxay dalban doonaan helitaan dheeraad ah oo macluumaad dheeri ah waqtigooda iyo arrimo badan oo qaab ah.
Maxay tahay fikirkan ka dambeeyay maktabadda makhaayadaha ee iModel.js?
Waxaan baranay in macluumaadka lagu kaydiyay feylasha laxiriira barnaamijyada nashqadeynta ay laxiriiri karaan macluumaadka laga helo ilo kale oo badan oo dibada ah; GIS, khariidaynta, hantida iyo nidaamyada wadooyinka, tusaale ahaan. Waanan ogayn inay jirto baaq loogu talagalay raadinta dhacdooyinka wanaagsan iyo noocyada kale ee tabinta tooska ah Marka waxay umuuqatay mid dabiici ah in lawaafajiyo aragtida wadada iyo naqshadeynta wadadan iyo taraafikada ugu dambeysay ee wadada. Dadku waxay leeyihiin waayo-aragnimo maalinle ah oo loo adeegsado barnaamijyada noocan ah macluumaadka, mana fahmi karaan sababta ay u adkaanayso. Waa inaan ka shaqeynaa sameynta isku xirnaanta kuwa sida ugu fudud ee aan awoodno.
Waxaa jira hadal badan oo ku saabsan "xogta mugdiga ah", waa maxay dhab ahaantii?
Dunida mihnadlaha, codsi kasta waxaa loogu talagalay in lagu xalliyo dhibaatada la taaban karo, qaar badan oo ka mid ahi waxay uuraysteen sanado ka hor. Waxay ku kaydiyaan xogtooda hab si sahlan u soo galaan codsiga la sameeyay. Inta badan - oo waxaan u hadlaa codsigeena gaarka ah - macquul waa sida fahamka in macluumaadka uu ku jiro codsiga, ee aan ku jirin faylka. Faylka kaliya waa taxanayaal isdabajoog ah iyo markaad isku daydo inaad fahamto adigoon codsiga sameyn, waa mid aan ku habboonayn. Mugdigu waa in codsiyada kale aan turjumi karin oo aan si fiican u sawirin.
Waxaan nahay denbiile ah inan abuuro xaaladdan qof ahaan. Laakiin gobolka adduunka hadda waa in aan haysanno tiro la taaban karo ee codsiyada loo baahan yahay si loo horumariyo wadashaqeyn dhamaystiran ee faylasha faylasha madaxbannaan. Qofna kuma guuleysan karo. Waan haynaa xogta, waana qiimo badan yihiin, laakiin waannu luminaynaa.
Ilo furan ayaa ah tallaabo weyn oo loogu talagalay Bentley, maxaa hadda?
Waxaan ku dooday arrintan wakhti dheer, laakiin ma furi kartid oo keliya furaha koodhka ee ku yaal barkada codka. Haddii aan horumarinay ilo bannaan oo dalabkeena ah dhowr sano ka hor, geeddi-socodka dhismaha ayaa noqon lahaa mid aad u adag. Kaliya sharaxaad ka bixi sida ay u shaqeyneyso waxay ka hooseysaa awooda ay tahay kormeeraha joogtada ah - iyo codsiyada keli ah oo si guul leh u furan waa kuwa indha-indheer-kiciyuhu ay macno samayn karaan. Waxaa laga yaabaa in qofka indha-indheeyaasha ahi aanu wax uun isbeddelin, laakiin waxay yihiin sababta ilo furan - waa sababtoo ah dadku waxay u isticmaali karaan waxyaabo aan loogu talagelin.
Uma maleyneyno in sababta oo ah ay jirto, in dadku isticmaalaan. Waxaan u baahanahay inaan si adag u shaqeyno si aan u xaqiijino isticmaalka iModel.js inay tahay maalgelinta iyo waqtiga.
Miyaad kula kulantay caqabad kasta ee Bentley ka badan ilaha furan?
Xoogaa! Waxaa jiray xaalad adag oo ka jirta Bentley Systems oo sheegay in ay ahayd fikrad aad u xun. Waxaan nahay shirkad software. Waxaan iibinaa software-ka Dadku waxay rumeysnaayeen inaan bixinayay waxa ay isku dayayeen inay iibiyaan. Oo anigu waxaan isku dayay inaan sharaxo in aanan dhab ahaantii iibin software, waxaan iibin natiijada software. Dadku naga ma siiyaan barnaamijka, waxay na siiyaan waxa ay qabtaan.
Waxaad yiraahdeen in badan oo ah barnaamijka furan ee la furo ayaa la iska indho tirayaa, caqabadaha aad kala kulmeysid markaad xiiso u hesho?
Samee dadka in ay helaan muhiimadda aan lahayn. 1. Laakiin taasi waa bilowgii ciyaarta. Kadibna waxay cadayn doonaan. Waxay yeelan doonaan su'aalo. Waxay ku jiri doonaan dhibaatooyin. Waxay doonayaan inay isbedel sameeyaan. Waxay soo jeedin doonaan fikrado kale. Inaad awood u yeelatid inaad ka jawaabto heerarkaas oo dhan waa waxa ka dhiga mashruuca khayraadka furan oo si fiican u shaqeeya.
Nidaamka furan ee furan waa inuu helo tiro muhiim ah ka hor inta dadku u maleynayaan inay qayb ka yihiin arrin wayn. Qofna ma doonayo in uu ka shaqeeyo wax haddii ay u maleynayaan inuu dhimanayo. Inaad noqoto ilo furan micnaheedu maahan in dadku si isdaba joog ah usoo raaci doonaan oo ay noqdaan kuwa fayras leh ee alaabtayada. Waa inaan sameynaa taas oo run ah.
Had iyo jeer waxaan ku faraxsanahay tirada dadaalka ah ee Google iyo qaar kale oo mashaariicdooda ah. Waxay sameeyaan wax ilka furan, ka dibna waxay koox ka iibiyaan koox suuq ah oo ay ku iibiyaan. Haddii aad wax weydiiso, qof ayaa kuu jawaabaya. Dhibaato kasta oo aad haysato, waxaa jira qof halkaas jooga si uu kuu caawiyo, had iyo jeer kama soo qaadin ilaha asalka ah ee asalka ah iyo bulshada internetka. Waxay leeyihiin nidaam dabiici ah oo tusaalayaal ah. Waxay u egtahay in ay nafteeda quudiso.
Bal qiyaas waxaad ku qorayso barnaamij. Haddii aadan dooneynin in aad daabacato koodhka ilahaaga, waxay noqon kartaa mid adag oo adag. Haddii aad shaqeyso, shaqee. Laakiin haddii aad sheegayso in dadka isticmaala ay ku dhejin karaan waxyaallahooda waxyaabaha kor ku xusan, haddii aad doonayso inaad soo jeediso in ay tahay dhibic soo galo shaqooyinka dadka kale, waa inaad caddeysaa inay mudan tahay waqtigeeda. Maaha tallaabo cad oo horay loo soo qaaday. Toban sano ka hor waxaan dhihi lahaa; Meelna ma aha, waa mid aad u adag. Laakiin marka la isku daro habka loo yaqaan "iTwin model" iyo xaqiiqda ah in hannaanka xayeysiiska ee loo yaqaan 'ecosystem for the world's open source source', waxa loola jeedaa inaynu rajeyneyno inaanu ku faanno.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaan aragnaa wada shaqeyn ka dhaxeysa shirkadaha ugu waaweyn, Bentley wuxuu la shaqeeyaa Microsoft, Siemens iyo Topcon iyo kuwa kale, maxay tahay taas?
Ilaa dhowr sano ka hor anaga marnaba si dhab ah uma wada shaqeynin. Muddo ka dib, waxaan dhahay waxaan nahay dhexdhexaad ah iyo in aan si isku mid ah u taageernay. Laakiin Topcon iyo Siemens iyo kuwa kale waxay yimaadeen, waxayna u egtahay qaab tusaale ah oo shaqayn kara; labada ayaan heleynaa faa'iido. Mararka qaarkood waxaanu ka doodnaa meelaha xuduuduhu ka dhexeeyaan waxa aan sameyno / sameyno iyo inta ay tahay in ay na siiyaan / lacag intee le'eg ayay tahay in la bixiyo. Laakiin waxaan qabaa inaan labaduba ka fiican nahay haddii aynaan haysan heshiisyada iskaashiga ah.
Marka laga hadlayo Topcon, waxaan wada shaqeynaa marka ay si fiican u habboonaanayso mudnaanteena. Waxaan mar kasta isku dayaa inaan ku sii sheegno meesha aan u socdo, si aan u dhaafin. Adiga ma sameyn kartid qof kasta. Xiriir gaar ah ma aha mid khaas ah haddii aad leedahay xiriir noocaas ah qof kasta. Fikraddaas oo ah heshiis wadashaqeyn, oo aan hadda wadaagno horumarinta, ayaa noqday nooc ka shaqeeya si fiican. Anigu ma aan saadaalin Karin. Run ahaantii, ma ihi rumaystaha fikradda, laakiin waan ku faraxsanahay inay caddeyn karaan inaan qaldanahay.
Maadaama uu aasaasay Bentley, maxaad ugu faantaa?
Waxaan sameynay iibsiyada 105, qaar ka mid ah ayaa ah kuwo sii kordhaya ama waxay sii dheeraadeen kuwa kale. Laakiin waxa aan helno marar badan waa dad fiican. Boqolkiiba tiro badan oo ka mid ah asxaabteena waxay soo mareen iibsiyadan. Haddii aad tahay ganacsi yaryar oo aad adigu leedahay shirkad wayn, markaa waxaa jira laba wado oo aad raaci kartid: raac jidkaaga kuna soo celi shirkad yar, ama arag fursada. Waxaan ku guuleysanay inaan qancino qaar ka mid ah dad aad u caqli badan in ay joogaan.
Waxaan nahay isku dhaf ah 105 shirkadood oo isu yimid sanadihii la soo dhaafay. Waa laga yaabaa inaan bilaabay, laakiin amaan badan kuma qaadan karo waxa aan noqonay. Markii aan fadhiisto dhabarka dhagaystayaasha oo aan daawado Demo Synchro, oo hadda loo yaqaan "Bentley Synchro," Waxaan is leeyahay, nin yahow, raggaasi waa caqli badan yihiin. Waxaan ku noolahay sharaftiisa ka muuqata. Waxaan dareemay si la mid ah helitaanka Acute3D dhowr sano ka hor. Raggaas waa kuwo aad u fiican. Waxay abuureen qalabkan cajiibka ah. Waan helnaa. Waan eegaa iyada, oo waxaan is iri, nacalaa, magaceygu ​​waa jiraa. Taasi waa wax aad u wanaagsan.
Sidee ayaad u dareemeysaa xajmiga Bentley hadda?
Markii aan bilownay, waxaan isku dayey inaan sii joogo ganacsiga muddo dheer oo aan ku bixiyo biilasha. Muddo hal mar ah, waxaan ogaa qof kasta oo ka shaqeeyay Bentley Systems. Waan ogaa wixii ay qaban lahaayeen. Wuxuu ogaa carruurtiisa. Taasi way ka duwan tahay hadda. Waxaanu balaarinnay dhibaatooyinka aan ahayn kuwa aan horay u soo aragnay. Waxaanu sii ballaarinnay suuqyada oo aan noqon lahayn suuqeena caadiga ah. Gaaritaankayagu waa ka sii ballaadhan yahay hadday ahaan lahayd haddii aan si caadi ah u korinnay. Maxay ahayd qorshe lagu bilaabi lahaa Bentley? Anigu waxaan u shaqeynayay DuPont, oo ahaa user user. Walaalkay Barry wuxuu bilaabay shirkad software ah, waxaanan ka tagay DuPont si aan u shaqeeyo isaga. Dhanka kale, DuPont wuxuu i waydiistay inaan hagaajiyo software-yada aan qorey halkaan halkaa ka shaqeynayo. Waxaan u sheegay iyaga inaan wanaajin lahaa haddii ay i siiyeen xaq ay ku iibiso. Taasina waxay ahayd bilowgii. Waxaan billaabay Bentley Systems waxayna bilaabeen iibinta software CAD.
Waxaan wareysi la yeeshay Greg Bentley back to 2016 oo way waydiiyeen waxa ay ahayd sidii ay ula shaqeyn lahayd walaalihiis, sideed u muuqatay?
Waxaan kugula talinayaa in aadan sameynin! Laakiin waxay si fiican u muuqatay. Marnaba run ahaantii ma jirin qorshe dhammeystiran. Markii aan bilownay shirkadda, waxaa jiray shan qof oo halkaa ka shaqeynayey xilligaas, hooyadeyna waa la baddalay. Waxay rumaysan kari waayeen in softwareku dhab ahaantii ahaa. Ma sameyn kartid fikradda ah in dadku ay bixin doonaan wax ayan waxba ka qaban. Waxay si dhab ah uga walaacsaneyd in dhammaan shanta carruurteeda ay noqon doonto shaqo la'aan oo gurigoodii ku noqdaan.
Maxaad ka fileysaa Bentley in 2019?
Fikradda lamaanaha dhijitaalka ah. Qof ayaa doonaya inuu sameeyo. Qof kasta oo horumariya wuxuu fiicnaadaa inuu helo fursado suuq weyn ka badan wixii hadda jira. Fursadkan, jajabkani wuxuu ku yaala warshadaha halkaas oo ay jirto kala-guur weyn oo u dhexeeya adduunka hadda aan la kala-tagin iyo adduun-yaraha twin-gada ah waa suuq ay tahay in aan sida ugu dhakhsaha badan u qaadno. 2019 wuxuu noqon karaa Sannad Sannad ah.
Waxaan joogay bilowga maalmaha kumbuyuutarka. Kumbuyuutarku wuxuu ahaa mid cusub, qof walbana wuxuu qiyaasayay waxyaabaha suurtagal noqon kara. Waxaan u maleynayaa inaan mar labaad ku suganahay albaabka bilowga mataano dijitaal ah. Maaha fikrad cusub, dhismaha iyo kaabayaasha ayaa ah kuwa dib u dhac ku ah tan. Haddaan fiiriyo qaabka ganacsigu u kobcayo sanadka 2018, uma muuqdo wax ka duwan sidii aan u bilownay 1984. Haa, waxaan haysannaa warqad dijitaal ah. Haa, waxaan haynaa moodooyinka 3D. Laakiin qandaraasyadu waxay yiraahdaan wax isku mid ah, dadkuna guud ahaan waxay u dhisaan si isku mid ah sidii hore. Waxyaabaha sida Synchro waa kacaan, laakiin si ballaaran looma isticmaalo. Marxaladdan soo socota, waxyaabo badan ayaa ka duwanaan doona.
Natiijo kasta oo ka soo baxa fursadaha abuuray adduunka twin-gada ah, ayaa noqon doona il-banaan oo furan. Waan hubaa taas. Anigaa la igu wareersan yahay si aan ula tartamo isaga, sidaas darteed waxaan dooneynaa inaan hogaanka uhesho. Waa wax sahlan, ka dib iminka 35 sanadka hadda, in la yiraahdo, waan sameeyay. Laakiin waxaan dareensanahay in aan ku jirno xariiqda bilawga ah ee tartanka in ay u jeedaan gadaashiisa dahabka ee soo socda.
Keith Bentley, Founder iyo CTO, Bentley Systems, la hadlaya Darrell Smart iyo Abigail Tomkins.
CES Diisambar 2018 / Janaayo 2019
Post Previous" Hore Xaqiiqo muuqda ama mid run ah Taasoo ka fiican in la soo bandhigo mashruuc?
Post Next Kudar sawirada dayax gacmeedka iyo falanqeynta soo saaraha adoo isticmaalaya LandviewerNext »